Keyboard, mouse ရတော့မယ့် Xbox One – REDPlayer
အချိန်မအကြာကြီး စောင့်ခဲ့ရတယ်ပြောမလား၊ အငြင်းပွားခဲ့ရတယ်ပြောမလား၊ Console တွေမှာ mouse နဲ့ keyboard သုံးလို့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါ။ Microsoft ကတော့ ကြေငြာလိုက်ပါပြီ။ မကြာခင် Xbox One တွေမှာ mouse နဲ့ keyboard သုံးလို့ရတော့မယ်ပြောပါတယ်။ Razer နဲ့ပေါင်းလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒါက microsoft တစ်ဦးတည်းလုပ်လို့ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Game developer တွေနဲ့လည်းဆိုင်ပါသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ game တွေမှာ ဒီအချကတွေကိုထည့်ပေးမှပဲ တကယ်ဆော့လို့ရမှာပါ။ လက်ရှိ အချိန်မှာ ဘယ်လို update မျိုးကမှ ကျွန်တော်တို့ဆော့နေတဲ့ ဂိမ်းတွေအားလုံးကို ချက်ချင်း kb နဲ့ mouse တပ်ပြီးဆော့လို့ရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခုပဲ developer တွေက patch ထုတ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ထပ်လာမယ့် ဂိမ်းအသစ်တွေမှာ အသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Xbox သမားတွေက Warframe ကိုတော့သိကြပါလိမ့်မယ်။ kb နဲ့ mouse နဲ့ တွဲသုံးလို့ရအောင် ပထမဆုံး patch ထုတ်နိုင်တဲ့ ဂိမ်းဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ microsoft က ဘယ်အချိန်မှာ patch ကိုထုတ်မလဲတော့ မပြောသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်မတွေ့တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ Insider program မှာပါတဲ့ တစ်ချို့ Xbox One သမားတွေက တော့ kb နဲ့ mouse စမ်းသုံးလို့ရနေပါပြီ။ November မှာလုပ်မယ့် X018 ပွဲမှာတော့ အသေးစိတ်တွေအ ဒီထက်ပိုသိရပါလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်းထဲမှာ console မှာဘောလုံးပဲကန်တတ်တဲ့ PC gamer နဲ့ PC မှာဆို FPS မနိုင်တဲ့ console player ရှိနေတုန်းပါပဲ။
XIM apex နဲ့စမ်းထားဘူးတဲ့ Xbox One ပိုင်ရှင်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ good for you!
(Insider Program ဆိုတာက Micorsoft ရဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ဒီ Program မှာပါမယ်ဆိုရင် Xbox မှာတင်မယ့် app နဲ့ game အသစ်တွေကိုစမ်းသပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခြား Window 10 PC အတွက်လာမယ့် ကိစ္စတွေရောပေါ့။ ဒီကိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ် Microsoft Insider program။ သတ်မှတ်ချက်တွေတော့ရှိပါတယ်။)
အခြိနျမအကွာကွီး စောငျ့ခဲ့ရတယျပွောမလား၊ အငွငျးပှားခဲ့ရတယျပွောမလား၊ Console တှမှော mouse နဲ့ keyboard သုံးလို့ရတော့မယျဆိုတဲ့ ကိစ်စပါ။ Microsoft ကတော့ ကွငွောလိုကျပါပွီ။ မကွာခငျ Xbox One တှမှော mouse နဲ့ keyboard သုံးလို့ရတော့မယျပွောပါတယျ။ Razer နဲ့ပေါငျးလုပျတယျလို့သိရပါတယျ။
ဒါက microsoft တဈဦးတညျးလုပျလို့ရတဲ့ ကိစ်စတဈခုတော့ မဟုတျပါဘူး။ Game developer တှနေဲ့လညျးဆိုငျပါသေးတယျ။ သူတို့ရဲ့ game တှမှော ဒီအခကြတှကေိုထညျ့ပေးမှပဲ တကယျဆော့လို့ရမှာပါ။ လကျရှိ အခြိနျမှာ ဘယျလို update မြိုးကမှ ကြှနျတျောတို့ဆော့နတေဲ့ ဂိမျးတှအေားလုံးကို ခကျြခငျြး kb နဲ့ mouse တပျပွီးဆော့လို့ရအောငျမလုပျပေးနိုငျပါဘူး။ တဈခုပဲ developer တှကေ patch ထုတျပွီးပဲဖွဈဖွဈ နောကျထပျလာမယျ့ ဂိမျးအသဈတှမှော အသုံးပွုလို့ရအောငျလုပျပေးသှားမယျဆိုရငျတော့ အကောငျးဆုံးဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
Xbox သမားတှကေ Warframe ကိုတော့သိကွပါလိမျ့မယျ။ kb နဲ့ mouse နဲ့ တှဲသုံးလို့ရအောငျ ပထမဆုံး patch ထုတျနိုငျတဲ့ ဂိမျးဖွဈလာမယျထငျပါတယျ။ microsoft က ဘယျအခြိနျမှာ patch ကိုထုတျမလဲတော့ မပွောသေးပါဘူး။ ကြှနျတျောမတှတေ့ာလဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာတော့ Insider program မှာပါတဲ့ တဈခြို့ Xbox One သမားတှကေ တော့ kb နဲ့ mouse စမျးသုံးလို့ရနပေါပွီ။ November မှာလုပျမယျ့ X018 ပှဲမှာတော့ အသေးစိတျတှအေ ဒီထကျပိုသိရပါလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈပေါ့၊ ကြှနျတျောတို့ အခငျြးခငျြးထဲမှာ console မှာဘောလုံးပဲကနျတတျတဲ့ PC gamer နဲ့ PC မှာဆို FPS မနိုငျတဲ့ console player ရှိနတေုနျးပါပဲ။
XIM apex နဲ့စမျးထားဘူးတဲ့ Xbox One ပိုငျရှငျတှလေညျးရှိနိုငျပါတယျ။ good for you!
(Insider Program ဆိုတာက Micorsoft ရဲ့ program တဈခုဖွဈပွီးတော့ ဒီ Program မှာပါမယျဆိုရငျ Xbox မှာတငျမယျ့ app နဲ့ game အသဈတှကေိုစမျးသပျလို့ရပါလိမျ့မယျ။ တဈခွား Window 10 PC အတှကျလာမယျ့ ကိစ်စတှရေောပေါ့။ ဒီကိုသှားကွညျ့လို့ရပါတယျ Microsoft Insider program။ သတျမှတျခကျြတှတေော့ရှိပါတယျ။)